Famakiana Baiboly isan'andro Androany 27 Oktobra 2018 | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Famakiana Baiboly isan'andro Androany 27 Oktobra 2018
Famakiana Baiboly isan'andro Androany 27 Oktobra 2018
Ny famakiana Baiboly ataontsika isan'andro dia nalaina ao amin'ny 2 Tantara 17: 1-19, 2 Tantara 18: 1-34. Vakio sy ho voatahy.
2 Tantara 17: 1-19:
1 Ary Josafata zanany no nanjaka nandimby azy ary nampahery ny Isiraely. 2 Ary nametraka tafika tamin'ny tanàna mimanda rehetra any Joda izy ka nametraka miaramila tany amin'ny tanin'ny Joda sy tany amin'ny tanànan'ny Efraima izay azon'i Asa rainy. 3 Ary Jehovah nomba an'i Josafata, satria nandeha tamin'ny làlana voalohany nataon'i Davida rainy izy nefa tsy nitady tamin'ireo Bala; 4 Fa nitady an'i Jehovah, Andriamanitry ny rainy, nefa nandeha tamin'ny didiny ary tsy araka ny fanaon'ny Isiraely. 5 Koa dia nampitoerin'ny Tompo eo an-tanany ny fanjakana; ary ny Joda rehetra nitondra fanomezana ho an'i Josafata; ary nanana harena sy voninahitra be izy. 6 Ary niavonavona ny fony tamin'ny lalan'i Jehovah, ary noravany tsy ho eo amin'ny Joda ny fitoerana avo sy ny Aseraha. 7 Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakany, dia naniraka ny mpanapaka azy izy, dia Beni-havandra sy Obadia ary Zakaria sy Netanela ary Mikasa, hampianatra any an-tanànan'ny Joda. 8 Ary niaraka taminy dia nandefa ny Levita, dia Semaia, sy Netania, sy Zebadia, sy Asahela, sy Semiramota, sy Jonathan, Adonia, Tobia, ary Tob-adonia, samy Levita; ary niaraka taminy Elisama sy Jorama, mpisorona. 9 Ary nampianatra tany Joda izy ireo, ary nentiny ny bokin'ny lalàn'ny Tompo, dia nitety ny tanànan'ny Joda rehetra izy ka nampianatra ny olona. 10 Ary ny fahatahorana an'i Jehovah nahazo tamin'ny fanjakana rehetra manodidina ny Joda, ka dia tsy niady tamin'i Josafata izy ireo. 11 Ary ny Filistina sasany nitondra fanomezana sy volafotsy hetra; ary ny Arabo nitondra ondry aman'osy ho azy, dia ondrilahy fitonjato sy fito arivo, ary osilahy fitonjato sy fito arivo. 12 Ary Josafata nihalehibe indrindra; ary nanorina trano mimanda sy tanàna fitehirizana tany Joda izy. 13 Ary nanana fananana be dia be izy tao an-tanànan'ny Joda; ary ny lehilahy mpiady, ny lehilahy mahery, dia tany Jerosalema. 14 Ary izao no isan'ny isan'ireo araka ny fianakaviany: Avy amin'i Joda, dia mpifehy arivo; Adna no lohany, ary ny fehiny dia lehilahy mahery telo hetsy. 15 Ary nanarakaraka azy dia Johanana komandy, ary ny fehiny dia valo alina amby roan-jato. 16 Ary manarakaraka azy dia Amasiasa, zanak'i Zikry, izay nanolotra ny tenany an-tsitrapo ho an'ny Tompo; ary nomba azy ny lehilahy mahery roa hetsy. 17 ny amin'i Benjamina; Eliada dia lehilahy mahery, ary ny fehiny dia lehilahy roa hetsy mitondra tsipìka sy ampinga; 18 ary nanarakaraka azy dia Jozabad, ary niaraka taminy valo alina amby iray hetsy voaomana hiady. 19 Ireo dia niandry ny mpanjaka, afa-tsy izay napetraky ny mpanjaka tamin'ny tanàna mimanda eran'i Joda rehetra.
2 Tantara 18: 1-34:
1 Ary Josafata nanana harena sy voninahitra be sady nampanompo an'i Ahaba. 2 Ary rehefa afaka taona vitsivitsy, dia nidina tany amin'i Ahaba nankany Samaria izy. Ary Ahaba namono ondry aman'osy sy omby betsaka ho azy sy ny olona izay nomba azy ka namporisika azy hiakatra miaraka aminy ho any Ramota-gileada. 3 Ary hoy Ahaba, mpanjakan'ny Isiraely, tamin'i Josafata, mpanjakan'ny Joda: Mba hiaraka amiko ho any Ramota-gileada ve ianao? Ary hoy izy taminy: Tahaka ny tenanao aho, ary ny oloko dia olonao; ary homba anao izahay amin'ny ady. 4 Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Isiraely: Masìna ianao, anontanio, anio ny tenin'i Jehovah. 5 Ary ny mpanjakan'ny Isiraely nanangona mpaminany efa-jato lahy ka nanao taminy hoe: Handeha hanafika any Ramota-gileada ve aho, sa hijanona aho? Dia hoy izy: Miakara; fa hatolotr'Andriamanitra eo an-tànan'ny mpanjaka izany. 6 Fa hoy Josafata: Moa tsy misy mpaminanin'ny Tompo va eto mba anontaniantsika? 7 Ary hoy ny mpanjakan'ny Isiraely tamin'i Josafata: Mbola misy olona iray ihany, izay ahazoantsika manontany amin'i Jehovah; nefa halako izy; fa izy tsy mbola naminany soa ho ahy, fa ny ratsy foana. dia Mikaia, zanak'Imla. Ary hoy Josafata: Aoka ny mpanjaka tsy hanao izany. 8 Ary ny mpanjakan'ny Isiraely niantso ny manamboninahiny ka nanao hoe: Alao faingana Mikaia, zanak'Imla. 9 Ary ny mpanjakan'ny Isiraely sy Josafata, mpanjakan'ny Joda, samy nipetraka tamin'ny seza fiandrianany avy, niakanjo ny akanjony ary nipetraka tamin'ny toerana tsy misy tomika teo am-bavahadin'ny vavahadin'i Samaria; ary ny mpaminany rehetra naminany teo alohany. 10 Ary Zedekia, zanak'i Kenana, dia nanao tandroka vy ka nanao hoe: Izao no lazain'i Jehovah: Ireto no hanosihanao an'i Syria mandra-pahalany ritrany. 11 Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izao hoe: Miakara any Ramota-gileada, dia hambinina; fa hatolotry ny Tompo eo an-tànan'ny mpanjaka izany. 12 Ary ilay iraka izay niantso an'i Mikaia dia niteny taminy ka nanao hoe: Indro, ny tenin'ny mpaminany dia milaza soa amin'ny mpanjaka amin'ny fanekena iray; koa avelao ny teninao mba ho tahaka ny iray aminy ka hiteny soa ianao. 13 Ary hoy Mikaia: Raha velona koa Jehovah, dia izay holazain'Andriamanitro ihany no hambarako. 14 Ary nony tonga teo amin'ny mpanjaka izy, dia hoy ny mpanjaka taminy: Ry Mikaia, handeha hanafika an'i Ramota-gileada ve isika, sa hijanona aho? Ary hoy izy: Mandehana, dia hambinina, fa hatolotra eo an-tananao izy ireo. 15 Ary hoy ny mpanjaka taminy: Impiry no hampianiana anao aho fa tsy milaza na inona na inona amiko amin'ny anaran'i Jehovah intsony ianao? 16 Ary hoy Izy: Izaho dia nahita ny Isiraely rehetra niely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry; ary hoy ny Tompo: Tsy manana tompo ireo; koa aoka samy hody soa aman-tsara any an-tranony izy rehetra. 17 Ary hoy ny mpanjakan'ny Isiraely tamin'i Josafata: Tsy efa nolazaiko taminao va fa tsy mba mety maminany soa amiko izy, fa loza? 18 Ary hoy koa izy: Henoy ary ny tenin'i Jehovah; Nahita ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany aho, ary ireo maro be rehetra any an-danitra nitsangana teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. 19 Ary hoy ny Tompo: Iza no hitaona an'i Ahaba, mpanjakan'ny Isiraely, mba handeha hiakatra ao Ramota-gileada? Ary ny iray niteny toy izao, ary ny iray kosa, araka izany fomba izany. 20 Ary nisy fanahy nivoaka, dia nitsangana teo anatrehan'ny Tompo ka nanao hoe: Izaho no hitaona azy. Ary hoy ny Tompo taminy: Ahoana? 21 Ary hoy izy: Hivoaka aho ka ho tonga fanahy mandainga ao am-bavan'ny mpaminaniny rehetra. Ary hoy ny Tompo: Ho hitaona anao izy, fa handresy koa ianao; mandehana, ka manaova. 22 Ary ankehitriny, indro, Jehovah efa nanisy fanahy mandainga ao am-bavan'ny mpaminaninao, ary Jehovah kosa efa nilaza ny loza hanjo anao. 23 Ary Zedekia, zanak'i Kenana, nanatona, dia namely ny takolak'i Mikaia ka nanao hoe: Taiza no lalana nialan'ny Fanahin'i Jehovah tamiko hiteny aminao? 24 Ary hoy Mikaia: Indro, ho hitanao ny andro hidiranao ao amin'ny efi-trano anatiny hierenao. 25 Dia hoy ny mpanjakan'ny Isiraely: Raiso Mikaia, fa ento miverina any Amona governora ao an-tanàna sy amin'i Joasy, zanak'andriana; 26 Ary lazao hoe: Izao no lazain'ny mpanjaka: Ampidiro ao an-tranomaizina ity olon-kafa ity, ary amboary hanina amin'ny fahoriana sy amin'ny rano fahoriana izy mandra-piveriko amin'ny fiadanana. 27 Ary hoy Mikaia: Raha tafaverina soa aman-tsara ianao, dia tsy ny Tompo no nitenenako. Ary hoy izy: Henoy, ianareo rehetra rehetra. 28 Dia niakatra nankany Ramota-gileada ny mpanjakan'ny Isiraely sy Josafata, mpanjakan'ny Joda. 29 Ary hoy ny mpanjakan'ny Isiraely tamin'i Josafata: Hody olon-kafa aho ka handeha hiady; fa ny akanjonao. Ka dia niery ny mpanjakan'ny Isiraely; ary nandeha niady izy ireo. 30 Ary ny mpanjakan'i Syria efa nandidy ny komandin'ny kalesy izay nanaraka azy ka nanao hoe: Aza miady amin'ny kely na amin'ny lehibe, afa-tsy amin'ny mpanjakan'ny Isiraely ihany. 31 Ary nony nahita an'i Josafata ireo komandin'ny kalesy, dia hoy izy: Izany no mpanjakan'ny Isiraely. Koa dia nanodidina azy izy hiady; ary Andriamanitra dia nanosika azy hiala taminy. 32 Ary nony hitan'ny komandin'ny kalesy fa tsy mpanjakan'ny Isiraely izy, dia niverina izy ireo nanenjika azy. 33 Ary nisy lehilahy anankiray nandefa zana-tsipìka kitoatoa ka nahavoa ny mpanjakan'ny Isiraely teo anelanelan'ny tonon-taolana intsony; fa maratra aho.
Previous lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro amin'ny 26 Oktobra 2018
Next lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro amin'ny 28 Oktobra 2018
21 Ireo teboka amin'ny vavaka hahazoana tari-dalan'Andriamanitra